BoJack Horseman ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်လမ်းညွှန် - စပွန်ဆာ
BoJack Horseman ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်လမ်းညွှန် - ၁၀ BoJack Horseman လက်ဆောင် ၁၀ ခု
Netflix မှာ Gad Elmaleh မှအထူးနှင့်အသစ်စီးရီးများကိုမှာယူသည် Netflix: Marvel ရဲ့အပြစ်ပေးသူသည် The Defenders နှင့်ဆက်သွယ်ပါသလား။ စပွန်ဆာ က ဖရန့် Urbina လွန်ခဲ့သော3နှစ်က @frankurbina_ နောက်ကိုလိုက်
အကောင်းဆုံးကာတွန်းဟာသတစ်ခုမှယခုထွက်ပေါ်လာသည်မှာသေချာသည်မှာ Netflix နှင့်ဖြစ်ပြီးမြင်းတစ်ကောင်ဖြစ်လာသောမင်းသား၊ သူ၏အေးဂျင့် (ကြောင်) နှင့်သူ၏အခန်းဖော် (လူသား) တို့၏ဘဝကိုလှည့်ပတ်သွားသည်မှာသေချာသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ BoJack Horseman အကြောင်းပြောနေတာပါ။ အကောင်းဆုံးကာတွန်းအစီအစဉ်အတွက်ရွှေဒါဘီဆုကို BoJack နှင့်သူ၏သူငယ်ချင်းများကကြည့်ရှုသူများအားစိတ်ပျက်ဖွယ်ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းများနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုပေါင်းစပ်။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအရောအနှောများဖြင့်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သည်။ ပရိုဂရမ်ကိုနှစ်သက်သောသူများအတွက်လူတိုင်းနီးပါးဖြစ်သင့်သည်၊ အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သင်အတွက် BoJack-related လက်ဆောင် ၁၀ ချက်လက်ဆောင်လမ်းညွှန်ကိုဖန်တီးထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဆောင်များကိုလာမည့်အားလပ်ရက်များနှင့်အတူ gander ပေးရမည့်အချိန်ကောင်းဖြစ်ပြီးပြပွဲ၏ Season4သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကမှထုတ်ဝေခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင်တစ်နည်းနည်းနဲ့သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုမတွေ့ပါကမစိုးရိမ်ပါနှင့်။ အမေဇုံ သငျသညျ peruse ဖို့ပို။ ပင် BoJack မြင်းစီးသူရဲပစ္စည်းများရှိပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာထပ်မိုတယ်လေကြောင်း bates ပါဘူး
BoJack မြင်းစီးသူရဲ 90 ကျော်တီရှပ်အတွက်ကျော်ကြား
BoJack Horseman ၏ပရိသတ်များသိသည်အတိုင်း, ကာတွန်းမြင်းရဲ့ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး '' 90 အပေါ်သူ၏အမြတ်ထုတ်မှုအတွက်ကျော်ကြားခဲ့သည်နှစ်ပေါင်း 20 အကြာတွင်ကမ္ဘာပေါ်မှာမိမိအရပျကိုရှာတွေ့ဖို့ရုန်းကန်။ ဒီစတိုင်ကျတဲ့ရှပ်အင်္ကျီဟာဆိုးတာမဟုတ်ဘဲကောင်းတဲ့အချိန်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်
Funko ပေါ့ပ်! Animation: BoJack Horseman Vinyl ပုံ
Funko ပေါ့ပ်! ဗီနိုင်းများသည်ကြီးကျယ်သည့်စုဆောင်းထားသောပစ္စည်းများဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့သည်သင်စဉ်းစားနိုင်သောစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကောင်တိုင်းအတွက်တစ်ခုရှိသည်။ ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့ BoJack တလုံးကိုသင့်စုဆောင်းမှုထဲကိုထည့်ပါ။
၃၄ လမ်း netflix တွင်အံ့ဖွယ်အမှု
BoJack မြင်းစီးသူရဲ - Dive Bar Crew Poster
BoJack ကိုများသောအားဖြင့် Elefante အိမ်တွင်ဖြစ်စေ၊ သူပိုင်ဆိုင်သည့်စားသောက်ဆိုင်၌ဖြစ်စေထင်ဟပ်နေသည်ဟုခံစားရသည့်နေရာနှစ်ခုတွင်စိုက်လေ့ရှိသည်။ ဒီပိုစတာတွင်တည်ရှိနေသောအခြားသူအကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်များနောက်ခံပတ်လည်တွင်သောက်နေသောဝမ်းနည်းဖွယ်သူရဲကောင်းကိုပြသထားသည်။
BoJack Horseman (မူရင်း Netflix စီးရီးမှဂီတ)
ဒီအံ့သြဖွယ်ပြပွဲ၏အကောင်းဆုံးရှုထောင့်တစ်ခုမှာပျော်စရာကောင်းသော, တစ်ခါတစ်ရံထိမိမူရင်းတေးသံဖြစ်ပါတယ်။ ယခုထိုစုဆောင်းမှုကိုသင်ကိုယ်တိုင် MP3၊ CD သို့မဟုတ်စပျစ်သီးအဖြစ်အသုံးပြုသည့်ဗီနိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်။
သမ္မတဒူးအမြင့်ခြေအိတ်များအတွက် Unisex BoJack မြင်းစီးသူရဲ
ကမ္ဘာကြီးသည်သမ္မတအဖြစ် BoJack Horseman နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်တနင်္ဂနွေအစောပိုင်းတနင်္ဂနွေကိုစတင်ရန်သူနာပြုများနှင့်သောကြာနေ့သူနာပြုများသူနာပြုများမှရလိမ့်မယ်။ ဤအ Hilary ခြေအိတ်နှင့်အတူစိတ်ကူးယဉ်မြင်းရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး rep, ဒါမှမဟုတ်ချစ်ရသူတစ် ဦး အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဆုကြေးဇူးကိုအဖြစ်သူတို့ကိုအမိန့်ပေး။
BoJack Horseman ခဲတံကိုင်ဆောင်ထားသူ
သူတို့ရဲ့ခဲတံကိုင်ဆောင်သူကို BoJack နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသွင်ပိုလိုချင်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်တော့ဒီပစ္စည်းကသင်လိုချင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။
netflix အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်အောက်တိုဘာ 2017
BoJack မြင်းစီးသူရဲ Spinner
ဘယ်အရာကမှသင့်အားမငြိမ်မသက်သောလှည့်ဖျားခြင်းကဲ့သို့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏အသစ်သောမငြိမ်မသက်လှည့်ကွက်ပေါ်တွင် BoJack ၏ပုံတူထားခြင်းထက်မည်သည့်အရာကမျှ ပို၍ အေးစက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဆည်းဆာ6သန်းခေါင်နေရောင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ
BoJack မြင်းစီးသူရဲ Guitar Pick Set
ဂစ်တာကသူတို့အပေါ်မှာဒဏ္legာရီမြင်းနဲ့ရွေးထားတယ်၊ ဒီပစ္စည်းကမင်းရဲ့ဘ ၀ မှာ BoJack ကိုနှစ်သက်တဲ့ဂီတပညာရှင်အတွက်လုံးဝပြီးပြည့်စုံတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပဲ။
iPhone7Plus BoJack မြင်းခုံဖုန်း Case
BoJack Horseman စတီရီယိုအိတ်ဆောင်နားကြပ် Over-Ear
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောတီးလုံးများကိုခံစား။ BoJack ကဲ့သို့ပေါ့ပါးပြီးနားကြပ်နှင့်တူသောကမ္ဘာ၏အသံများကိုပိတ်ထားပါ။
ဆိုလိုသည်မှာယခုကျွန်ုပ်တို့အဘို့ရှိသော်လည်းအားလုံးမှာရနိုင်သော BoJack နှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများနှင့်ဝေးသည် အမေဇုံ ။ သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်စုဆောင်းမှုတစ်ခုလုံးကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်ကျလွန်း။ သင့်အားလပ်ရက်စျေးဝယ်ခြင်းတွင်စတင်ပါ။
ဘယ်လို Ava စစ်သည်တော်သီလရှင်သေဆုံးခဲ့ရသည်
သုံးဆ9ထွက်လာပါဘူး
Pacific Rim ရှိရာစောင့်ကြည့်ဖို့